वकिलले किन लगाउँछन् कालो कोट र सेतो सर्ट ? यस्तो छ रोचक इतिहास !
Law Hub Nepal जेठ १, २०७७
वकिलको पहिरन भनेकै कालो कोट हो । त्यसैले त वकिललाई कालोकोटेको उपनामले पनि चिनिन्छ । अर्थात् प्रायः वकिलहरू कालो कोट र सेतो सर्ट लगाउँछन् ।
आखिर वकिलले कालो कोट लगाउनुका पछाडिको रहस्य के हो त ? नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरमै किन वकिलको पहिरन कालो कोट र सेतो सर्ट भयो त ?
स्मरण रहोस्, बेलायती शासक एडबर्ड तृत्तीयले सन् १३२७ मा वकालतको सुरुवात गरेका थिए । त्यस समय पहिरन संहिताका आधारमा न्यायाधीशहरूको भेषभुषाको मापदण्ड बनाइयो । त्यस समय न्यायाधीशहरूले शीरमा एक भुत्लायुक्त मुकुट लगाउँथे ।
सन् १६९४ मा बेलायती महारानीको बिफरका कारण मृत्यु भयो । रानीको मृत्युमा शोक मनाउनका लागि कालो गाउन लगाएर एकै ठाउँमा जम्मा हुनका लागि तत्कालीन राजा विलियम्सले सबै न्यायाधीश तथा वकिलहरूलाई आदेश दिए ।
रानीको मृत्युमा लगाइएको त्यो कालो पहिरन त्यसपछि वकिलहरूको आम पहिरन बन्न पुग्यो । सुरुमा गाउनको चलन थियो । तर विस्तारै कालो कोटको चलन आयो । समय क्रमसँगै कालो कोट वकिलको पर्यावाची बन्न पुग्यो ।
वकिलले लगाउने कालो कोटले मुद्दाको दुई पक्षलाई झल्काउँछ । कालो रङलाई प्रतिरक्षाको रङ मानिन्छ । कानुन अन्धो हुन्छ । यसले मानिसको रङ हेर्दैन, साक्षी र प्रमाण हेर्छ ।
कालो र सेतो रङ अन्तरविरोधी रङ हुन् । न्यायसँग संलग्न दुई पक्षबीच न्यायपूर्ण निर्णय निकाल्नु हो – कालो र सेतो रङ । सेतो र कालो रङ दुई विपरीत धारणाको प्रतीक हो । भनिन्छ, कालो रङ सुरक्षाको प्रतीक पनि हो ।
एजेन्सी तथा विभिन्न स्रोतहरू ।